हेर्दाहेर्दै १४४७ अंकमा झरिसक्यो सेयर ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बजार > हेर्दाहेर्दै १४४७ अंकमा झरिसक्यो सेयर !
हेर्दाहेर्दै १४४७ अंकमा झरिसक्यो सेयर !
काठमाडौ । आइतबार सेयर बजार ६.६९ अंकले घटेर १४४७.४५ अंकमा झरेको छ । होटलबोहक कारोबार भएका सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागेको छ । सबैभन्दा धेरै बीमा समू्ह ११.१७ अंकले घटेको छ भने विकास बैंक १०.९२ अंकले घटेको छ । त्यस्तै बैंकिङ, जलविद्युत्, फाइनान्स र अन्य क्रमशः ६.८७, ४.४७, ७.३ र ५.२ अंकले घटेका छन् । होटल समूहको परिसूचक भने ३३.२२ अंकले बढेको छ ।
आईतबार परिसूचक घटेपछि कारोबार रकममा सामान्य सुधार आएको छ । आइतबार ४१ करोडको कारोबार भएको छ । दिनभरिमा १३१ वटा कम्पनीको १७ लाख ६८ हजार ९ सय ६२ कित्ता सेयरको ४१ करोड १८ लाख ३० हजार पाँच सय ८६ रुपैयाँको किनबेच भयो ।
कुल कारोबारमध्ये, बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीको नौ करोड १२ लाख ४३ हजार एक सय ५३ रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सिटिजन्स बैंकको तीन करोडमाथिको कारोबार भएको छ । कुमारी बैंकको एक करोड ८४ लाख र प्राइम कमर्सियल बैंकको डेढ करोडको कारोबार भएको छ । एभरेष्ट बैंकको झन्डै डेढ करोडको कारोबार हुँदा नेपाल टेलिकमको पनि एक करोडमाथिको कारोबार भएको छ । सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको क्रमशः ८३ लाख, ७७ लाख र ७३ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
२०७३ पौष २४ गते १९:३८ मा प्रकाशित
डिम्याट खाता खोल्ने र नखोल्नेहरु सबैले जान्नैपर्ने धितोपत्रको यो कुरा !
३ बाणिज्य बैंकसहित ९ बैक तथा वित्तिय संस्थाको करोडौं कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत !
भैरहवामा अवैध क्यासिनो धन्दा !
यस्तो छ लोकसेवाले भर्खरै जारी गरेको सूचना
न्यूरोडमा गरिमाविकास बैंकको ४८ औं शाखा